तर… मुलभुत रुपमा जनताको संविधान बनेको छैन : रामबहादुर थापा ‘बादल’ (अन्तरवर्ता) « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
तर… मुलभुत रुपमा जनताको संविधान बनेको छैन : रामबहादुर थापा ‘बादल’ (अन्तरवर्ता)
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकालिन अवस्थामा छरिएर बसेका माओवादीबीच एकता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको एनेकपा माओवादीसँग एकता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका बादल आगामी जेठ भित्रै पार्टी एकता हुने वताउँछन् । द्वन्द्वकालिन घटनाका मुद्धालाई ओली नेतृत्वको सरकारले ब्युँताएर एमाओवादीमाथि षडयन्त्र गरिरहेको वताउने बादल सरकारमा एमाओवादी सहभागी हुँदा क्षति ब्यहोर्नु परेको वताउँछन् । पार्टीका केही सहकर्मी साथिहरुले साथ नदिए पनि ९० प्रतिशत बढी केन्द्रीय सदस्यहरुको सहमतिमा पार्टी एकिकरण हुने वताउँछन् । हक्की, निडर र स्पस्टवक्ताको रुपमा चिनिएका बादलसँग समसामयिक राजनीतिक, पार्टी भित्र चलेको एकिकरणको बहस लगायतका बिषयमा पत्रकार लिलाराज खनाल र बुद्ध लोप्चनले बादलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
हामी शान्ति प्रक्रियामार्फत नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले पूर्णता दिने र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित आएका थियौ । यो प्रक्रियाको एउटा चरणमा गएर हामीले त्यो उद्देश्य हासिल गर्न सकेनौं र नेपालको नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल हुन सकेन । त्यो एउटा सम्झौतामा गएर टुंगियो । त्यो परिणामले माओवादी पंक्तिभित्र विभाजन आयो । त्यसले थुप्रै नयाँ ढंगका समीक्षा पैदा गरायो । ती सबै घटनाको समीक्षा गरेर हामी एकताको निष्कर्षमा पुग्यौं । माओवादी आन्दोलन र शक्तिलाई नयाँ ढंगबाट एकता गर्ने र नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पूरा गर्ने लक्ष्यले हामी एकताको चरणमा छौँ । आमजनताको चाहना र इतिहासको आवश्यकता भएको हुनाले नयाँ ढंगबाट एकताको चरणमा हामी जुटेका हौँ ।
विभाजन हुनुको कारण के थियो र पुन बिनासर्त एकतामा लाग्नु भयो ?
विभाजनको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । खासगरी हामी के भन्छौँ भन्दा जनवादी क्रान्तिको मुख्य कार्यभार भनेको एउटा यहाँका राष्ट्रियताको सवाललाई हल गर्ने हो । यहाँ भारतीय विस्तारवादद्वारा जुन हस्तक्षेप र असमान सन्धि सम्झौता लादिएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने । जनवादी क्रान्तिको दोस्रो महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको राज्यसत्ता सामन्त, जमिनदार, दलाल र नोकरशाहको हातमा छ, त्यसलाई जनताको हातमा ल्याउनु हो । यी दुईवटा कार्यभार मुख्य हुन् । यो कार्यभारलाई निश्चित समयमा आएर हामीले पूर्णता दिन सकेनौँ । र किन पूर्णता दिन सकेनौँ भन्दा हाम्रो कार्यदिशा र नेतृत्वमा बिचलन आयो । दायाँ वा बाँया प्रकारका बिचलन देखा प¥यो । विशेषगरी नेतृत्वमा एउटा भारतीय विस्तारवाद नीति र अर्को नरम नीति देखा पर्न गयो । अर्को भनेको लोकतन्त्र र जनतन्त्रको सवाल होस् या वर्गीय सवालमा माओवादीहरुबीच एकप्रकारको विचलन पैदा भयो । यो कारणले गर्दा क्रान्तिलाई पूरा गर्न सकिएन । अन्तत: पुरानै अवस्थाहरु पुर्नस्थापित हुने सम्भावना भयो । हामीले ती कमजोरीहरुलाई सच्याएर माओवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।
माओवादीभित्र आएको बिचलनलाई मिलाउने आधार चाहिँ केके हुन् ?
माओवादीको संगठन त बिग्रिसक्यो, संगठनात्मक शक्ति कसरी आर्जन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
यो संविधानबाट संघीयता, गणतन्त्र जस्ता मुलभुत विषयहरु संस्थागत भएका छन् । तर मुलभुत रुपमा जनताको संविधान बनेको छैन । उही पुरानै गुट समुहलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । त्यसैले यो संविधानले जनताको केही अधिकारलाई संस्थागत त गरेको छ तर पनि मुलभूत रुपमा संविधानमा जनताका अधिकार संस्थागत हुन सकेको छैन । हामी संविधान वा राज्यव्यवस्था र राज्यसत्तामा हाम्रो मेल भएकाले एकता हुन सक्छ भन्ने कुरा हो ।
त्यसैले सरकारको उपयोगले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । अहिले पनि एमाओवादीले सरकारको जसरी उपयोग गर्नुपदथ्र्यो त्यो भएको छैन । बरु माओवादी नै एमाले वा अन्य तत्वद्धारा उपयोग भएको छ । अहिले माओवादीलाई यो सरकारबाट फाइदा भन्दा बेफाइदा पु¥याएको छ ।
पार्टीको एकसुत्रीय एजेण्डालाई समाधान गर्न बोलाएको बैठक बीचमा स्थगित गरिएको थियो । एकताको प्रस्तावमा निष्कर्ष निकाल्न हामी असक्षम भएकाले एक महिना बैठक स्थगित गरी माओवादी नेतृत्वसँग छलफल गरी एकताका सहमति÷असहमतिका बुँदा छुट्याई बैठकले निष्कर्ष निकाल्ने हाम्रो सहमति थियो । सँगै शीर्ष तहमा छलफल र गृहकार्य गर्ने हाम्रो योजना थियो । तर एक महिनासम्म कुनै छलफल नभएको र भएको छलफलमा पनि असन्तुष्टिका कारण अनुपस्थित भएकाले यसलाई फेरि केन्द्रीय समितिमा नै लगेर मूर्त रुप दिनुपर्दछ भनेर हामी लागि परेका छौँ । यो समस्यालाई हल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ । यो २८ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । केही सदस्यहरुले बैठक अझै स्थगित गर्नुपर्ने बताएपनि ९० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य बैठक सुचारु गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छन् । त्यसकारण बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको चाहना अनुरुप २८ गते फेरि बैठक सुरु हुँदैछ ।
माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई जुन मुद्दा लगाइएको छ । जुन द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ब्युताएको छ । ती मुद्दाहरुलाई मुख्य विषय बनाएर माओवादीहरुलाई सखाप पार्न विदेशी स्वदेशी लागि परेका छन् । निश्चित रुपमा षड्यन्त्र अनुसार नेतृत्वलाई छाडेर कार्यकर्तालाई सिद्याउने योजना बुनेका छन् । तर उनीहरुले कमाण्डरहरुलाई पनि हानिरहेका छन् । अहिले कार्यकर्तालाई मात्रै मुद्दा छ भन्ने होइन । प्रचण्डदेखि गाउँका सामान्य सदस्यसमेतलाई मुद्दा छ । दुश्मनले अरु तरिकाले पनि अख्तियारद्धारा पनि सिद्द्याउने योजना बनाइरहेका छन् । त्यसैले दुश्मनको योजना विफल बनाउनका लागि पनि समग्र माओवादीहरुले लडेर मात्रै यो समस्या हल गर्न सकिन्छ । अहिले विभाजित माओवादीहरु मिलेर यो मुद्दाहरुको फेस गरिरहेको छ । सरकारमा देखिएको खटपट पनि यही एउटा केन्द्रीय विषय हो । कमाण्डर पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकबाट